International Hotel Projects - Armati Hotel Project In Asia
Armati Hotel Project In Asia
Talata, Febroary 2, 2016 9: 19: 31 AM America / Los_Angeles
Ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny manomboka Armati 5 tetikasa any Thailand, Asia, Tonga soa eto amin'ny mitsidika ity trano fandraisam-bahiny mba hahita ny faucet.
Armati 541 andian-dahatsoratra faucet catalouge azafady jereo izao manaraka izao:
Tongasoa eto amin'ny Sheraton Hotel Royal Orchid & Towers, ny kanto 5-kintana trano fandraisam-bahiny miorina ao Bangkok renivohitr'i Thailand. Toerana eo amin'ny ny hilaza Chao Phraya River, rehetra ny 726 vahiny efitra fisehosehoana unobstructed ony fomba fijery.
Sheraton Hotel Royal Orchid & Towers ihany koa dia manolotra 28,000 Square Feet ny conferencing sy ny trano fivoriana, ary koa ny toerana sy tsy hay hadinoina ho an'ny stylish zava-nitranga sy ny fampakaram-bady. Hiara-misakafo amin'ny fianakaviana na ny namana indray offour trano fisakafoanana, na hisambotra ny fiderana shuttleboat ny Bangkok lanitra fiaran-dalamby mba hahita bebe kokoa ao an-tanàna ny sehatry fisakafoana mavitrika. Roa ala nenina fomba dobo filomanosana, dia milamina Spa, tenisy kianja, ary misaintsaina zaridaina maitso mavana hitaona ny fanahinareo mba hahatsapa ny tsara indrindra, ary azo antoka ny tsy hay hadinoina mijanona any am-5-kintana renirano Bangkok trano fandraisam-bahiny.